Nagu saabsan - Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Waxaan leenahay khad wax -soo -saar oo dhammaystiran iyo xarun si aan ula kulmo awoodda wax -soo -saarka iyo kooxdayada xirfadda leh ee baaritaanka tayada tayada leh Kooxdayada iibku waxay noqon doonaan 24 saacadood oo ka jawaabaya su'aalahaaga iyo xallinta dhibaatooyinkaaga. Bixinta, waxaan heshiis kula nahay DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF, TNT oo ah khidmadda dhoofinta iyo dammaanadda gaadiidka oo wanaagsan.
Tayadu waa udub dhexaadka, adeeguna waa mishiinka. Waxaan diirada saarnaa inaan siino macaamiisheena badeecooyin tayo sare leh oo ay weheliso adeegyada ugu fiican.Dhammaan alaabooyinka nalaga dalbaday waxay ku raaxaystaan ​​soo noqoshada ama soo celinta 7 maalmood oo shaqo gudahood haddii ay jiraan wax dhibaatooyin tayo leh iyo waxyeello gaadiid dhibaatadaada ku xali 24 saac gudahood.
Illaa iyo hadda, waxaan u adeegnay macaamiil ka kala yimid 50 dal oo adduunka ah, 80% ka mid ahna waxay siisay aqoonsi iyo qaddarin aad u sarreeya tayada badeecadeena iyo adeeggeena, waxayna sheegeen inay mar walba ilaalin doonaan xiriir iskaashi oo deggan. Waxaa ka mid ah, macaamiisheena waxaa ka mid ah iibsadaha shirkadaha, qaybiyaasha, dukaamada qadka iyo dukaamada internetka, iwm.
Ka go'an u adeegidda macaamiisheena iyo bixinta alaab tayo leh, waxaan rajeyneynaa inaan horumar sameyno oo aan si wadajir ah u horumarinno macaamiisheena. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan ilaalino xiriir iskaashi oo muddo dheer ah oo deggan macaamiishayada. Iyada oo si joogto ah loo hagaajinayo tayada badeecadayada iyo adeeggayaga, waxaan ka dhigi karnaa macaamiisheena inay dareemaan sahal iyo kalsooni dheeraad ah inay nala shaqeeyaan, sidaasna aan ku helno xaalad guul-wadareed. Dhibaatooyinka macmiilka, waxaan ku siin doonaa wadatashi iyo xalal sida ugu dhakhsaha badan, si aysan macaamiishu mar dambe u walwalin.
Kordhinta Indhaha, jeedal mink, dibinta, Iibiyeyaasha Indhaha, Jeexa indhaha, indho -dejiye,